Etu esi arịọ nkwụghachi maka ngwa ma ọ bụ egwuregwu na Storelọ Ahịa na Applọ Ahịa | Akụkọ akụrụngwa
N'oge 90s na mmalite 2000s, piano bụ ihe juru ebe niileỌ bụghị naanị n'ihi ọnụahịa nke ụfọdụ ngwa ma ọ bụ sistemụ arụmọrụ, mana ihe isi ike dị na inwe ike ịzụta ha n'ụzọ iwu kwadoro, ebe ọ bụ na njikọ Internetntanetị adịghị larịị ma ọ bụ na-enye ọsọ ọsọ njikọ ugbu a.
Ugbu a, ịzụta dijitalụ, ma egwu ma ngwa ma ọ bụ ihe nkiri, bụ usoro nke ụbọchị. Anyị niile zụtara ngwa ma ọ bụ egwuregwu maka ngwaọrụ mkpanaka anyị, ma ọ bụ iOS ma ọ bụ gam akporo, ma anyị chọrọ ịrịọ nloghachi maka ebumnuche dị iche iche.
Ihe kpatara anyị ji eweghachi ngwa ma ọ bụ egwuregwu ha nwere ike ịbụ nke ndị dịgasị iche iche, ma ọ bụ n'ihi na ọ naghị agụnye ọrụ anyị tụrụ anya ya, anyị enweghị mmasị na njirimara onye ọrụ, ọ naghị arụ ọrụ nke ọma na ngwaọrụ anyị (ọkachasị n'ime usoro okike gam akporo).
Arịrịọ ngwa laghachi ọ bụ a dị iche iche usoro na ma iOS na gam akporo, yana okwu enyere site na nyiwe abụọ iji nwee ike iji ikike nke nloghachi anyị mee ihe. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmata etu anyị ga-esi weghachite ngwa na gam akporo na iOS, ị ga-agbaso usoro ndị anyị kọwara n ’okpuru.
1 Etu ị ga-esi laghachi ngwa ma ọ bụ egwuregwu na gam akporo
1.1 Usoro iji weghachite ngwa na gam akporo
2 Etu ị ga-esi laghachi azụ ahịa dijitalụ na gam akporo
3 Otu esi arịọ maka nkwụghachi ụgwọ na gam akporo
4 Etu esi eweghachi ngwa ma ọ bụ egwuregwu na iOS
4.1 Usoro weghachite ngwa na iOS
5 Etu ị ga-esi laghachi azụ ahịa dijitalụ na iOS
6 Esi arịọ maka nkwụghachi ụgwọ na iOS
7 Onu ogugu ndi zuru ahia azughachighi onodu obula
Etu ị ga-esi laghachi ngwa ma ọ bụ egwuregwu na gam akporo
Tupu ịmalite ị rịọ maka nkwụghachi nke ego anyị kwụrụ maka ntughari dijitalụ, ọ bụrụ egwuregwu ma ọ bụ ngwa, anyị ga-amarịrị ihe ọnọdụ na usoro a na-enye site na ikpo okwu gam akporo.
android na-enye anyị oge nke awa 2 inwe ike iweghachi ngwa ebe anyị zụtara ya. Gam akporo achọghị ka ndị mmadụ rite uru na Storelọ Ahịa Play ma were na n'ime elekere abụọ, anyị nwere oge karịa iji nwalee ma hụ ma ngwa ma ọ bụ egwuregwu ahụ ga-egbo mkpa anyị.
Usoro iji weghachite ngwa na gam akporo
Nke mbụ, anyị na-eji akaụntụ anyị aga na Storelọ Ahịa Play Store njikọ a.
Ọzọ, anyị pịa taabụ Order History wee chọọ ngwa nke anyị chọrọ nkwụghachi.
Wee pịa More, na Rịọ nkwụghachi / Kpesa nsogbu.
N'ikpeazụ, anyị ga- họrọ ihe kpatara ya nke anyị chọrọ ịrịọ nkwụghachi site na igbe adaala gosiri.
N'ikpeazụ, anyị nwere ike itinye akara ederede ole na ole iji kọwaa nsogbu ahụ. Iji rịọ nloghachi, pịa Enviar.
Etu ị ga-esi laghachi azụ ahịa dijitalụ na gam akporo
Anyị na-atụle egwu, ihe nkiri na akwụkwọ dịka ịzụrụ dijitalụ. Enweghi ike iweghachite ọdịnaya a niile n'elu ikpo okwu. O kwere omume ma ọ bụrụ ọdịnaya adịghị mma, ihe na-agaghị ekwe omume ime.
Ihe kpatara ya bu ihe ezi uche di na ya, karisia n'ihe banyere ihe nkiri, ebe obu na anyi huru ya, ọ kwụsịrị inwe mmasị kpaliri anyị ịzụrụ ya.
Otu esi arịọ maka nkwụghachi ụgwọ na gam akporo
N'echiche a, Google enweghị mmasị na ya weghachi ego anyị kwụrụ maka ndenye ahaỌ bụrụ na anyị akwụọ, anyị jiri ya, oge. Mgbe anyị debanyere aha na ọrụ dị site na ngwa dị iche iche dị na Storelọ Ahịa Play, Google na-eme ka anyị mata na ọ bụrụ na anyị aga n'ihu, anyị agaghị enwe ike ịrịọ nkwụghachi nke ego anyị kwụrụ.
Nanị nhọrọ anyị nwere bụ ịnụ ụtọ oge nke nkwalite na kagbuo ya tupu njedebe nke ụbọchị ikpeazụ. Iji mee nke a, anyị ga-agbaso usoro ndị a site na njedebe gam akporo anyị:
Nke mbụ, anyị na-aga play Store na anyị nweta menu nke akaụntụ anyị.
Na-esote, pịa na Ndenye aha. Ọzọ, ndenye aha niile anyị nyere nkwekọrịta n'oge ahụ ga-egosipụta.
Iji kagbuo ndenye aha anyị, anyị ga-pịa bọtịnụ ahụ kagbuo.
Etu esi eweghachi ngwa ma ọ bụ egwuregwu na iOS
N'adịghị ka gam akporo, ngwa na egwuregwu ụlọ ahịa nke Apple na-enye anyị oge nloghachi ruo ụbọchị 14 iji weghachi ihe ọ bụla zụrụ anyị mere. Ozugbo oge a gafere, ọ gaghị ekwe omume ịrịọ nkwụghachi.
99% nke oge anyị agaghị enwe nsogbu ọ bụla na-arịọ maka nloghachi nke ngwa. Na 1% kwekọrọ na ikpe ebe Apple jụrụ ịlaghachi nke ngwa.
Ọ bụrụ na anyị na-azụta ma weghachite ọtụtụ ngwa na egwuregwu, ị na-eji usoro ma dịka Apple na-echeta n'ụkpụrụ ọrụ ya "... ị nwere ike ịjụ arịrịọ mbugharị ma ọ bụrụ na enwere ihe akaebe nke iji aghụghọ ma ọ bụ iji ọrụ eme ihe n'ụzọ na-ezighị ezi."
Usoro weghachite ngwa na iOS
Iji na-arịọ na nkwụghachi nke ngwa ma ọ bụ egwuregwu na anyị azụrụ mbụ anyị ga-emerịrị usoro ndị a:
Nke mbu, anyi aghaghi ileta web reportaproblem.apple.com e tinye data akaụntụ anyị.
Ọzọ, anyị ga-agarịrị na ngwa ahụ ịchọrọ ịlaghachi, pịa bọtịnụ ahụ Point.
N'ikpeazụ, anyị ga- họrọ ihe kpatara ya nke anyị chọrọ iweghachi ngwa anyị nwere n'aka anyị na igbe adaala ma tinye ụfọdụ ozi ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa na igbe ederede.
N'ikpeazụ anyị pịa Enviar ma anyi kwesiri ichere ka Apple zaghachi.
Ọ bụrụ na anyị emetụtaghị ọrụ a, usoro a na-adịkarị akpaka yana naanị awa ole na ole, oge ụfọdụ, anyị ga-enweta ozi-e na-egosi na ha anabatala nloghachi nke ngwa ma ọ bụ egwuregwu ahụ. akwụkwọ ọnụahịa na ego adịghị mma.
Etu ị ga-esi laghachi azụ ahịa dijitalụ na iOS
Dijitalụ ịzụrụ anyị na-eme ma na iTunes na Apple App Store, ma ha bụ akwụkwọ, ihe nkiri ma ọ bụ egwu enweghị ike iweghachi ha n'oge ọ bụla, dị ka gam akporo, maka otu ihe ahụ nke m kọwara.
Ọ bụrụ na ọdịnaya ahụ adịghị mma na anyị chọrọ ịrịọ nloghachi, anyị ga-aga na web reportaproblem.apple.com, gaa na ngalaba kwekọrọ na ọkara (ihe nkiri, mmemme tv, egwu ma ọ bụ akwụkwọ) wee pịa ebe iji gosipụta nhọrọ anọ ahụ na-enye anyị ohere ịhọrọ maka nkwụghachi.
Esi arịọ maka nkwụghachi ụgwọ na iOS
Ọ bụrụ na anyị enwetụbeghị ịkpachara anya iji kagbuo ndenye aha na oge Na ngwaọrụ anyị, Apple na-enye anyị ohere ịrịọ nkwụghachi nke ego anyị kwụrụ, ọzọ site n'otu weebụsaịtị ahụ anyị na-eji rịọ maka nkwụghachi nke ego anyị kwụrụ maka ngwa ma ọ bụ egwuregwu. N'okwu a, nhọrọ a na-enye anyị ka anyị rịọ ya bụ:
Achọghị m imeghari ndenye aha m.
Anabatabeghị ọdịnaya nke ịdenye aha.
Ihe ndenye aha anaghị egwu ma ọ bụ anaghị arụ ọrụ
Ndebanye aha m anaghị arụ ọrụ.
Ozugbo anyị họpụtara ihe kpatara ejiri amanye anyị ịkagbu aha ma rịọ nkwụghachi anyị kwụrụ, anyị nwere ike itinyekwu nkọwa na igbe ederede dị ala ma mesịa pịa Enviar.
Onu ogugu ndi zuru ahia azughachighi onodu obula
Ngwakọta zuru ezu, ma n'ime egwuregwu na ngwa, anaghị ewere ya dị ka nkwụghachi azụ n'oge ọ bụla n'elu ikpo okwu. Typedị nzụta a na-abụkarị n'ọtụtụ oge na egwuregwu ma na-enye anyị ohere ịzụta ihe ịchọ mma ma ọ bụ kwalite ọnọdụ anyị na egwuregwu ahụ, ịzụrụ na Google na Apple enweghị ike ịgbanwe onwe ha, mana kama onye nrụpụta ga-eme.
N'ihe banyere egwuregwu dị ka Fortnite, egwuregwu ahụ n'onwe ya na-enye anyị ohere ugboro atọ rịọ maka nkwụghachi maka mkpụrụ ego ejiri na egwuregwu ahụ, turkeys, (ma ọ bụghị ego anyị tinyere iji zụta ndị ahụ) ma ọ bụrụ na anyị mehiere mgbe ịzụrụ ma ọ bụ n'ihi na anyị echegharịala. Anyị nwere naanị ohere atọ, nke zuru oke maka ndị ọrụ ka ha ghara imebi ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Etu esi arịọ nkwụghachi maka ngwa ma ọ bụ egwuregwu na Storelọ Ahịa na Applọ Ahịa
Escobar Fold 1, mpịachi nke nwanne nwoke na-azụ ahịa ọgwụ Pablo Escobar